Kubvumirana hakuzokubudirire | Martech Zone
China, May 1, 2008 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Imwe yenharo dzakanyanya dzandaive nadzo pane rimwe remabasa angu yaive yekurega kutevedzera zvataurwa nemunhu wese uye kutanga kugadzira. Icho chokwadi ndechekuti chinotevera guru chinhu chiri kuzogadzirwa chisina munhu kukumbira icho.
Kana iwe uri zano kuita kuti munhu wese afare, iwe uchashandisa zvese zviwanikwa iwe zvauri kuyedza kuita inotevera kutengesa, kuenderera nemakwikwi, wedzera chakumbirwa maficha, kana kungo gadzira zvigadziriso zvevatengi vanopopota zvakanyanya. Unozozvishandira kusvika pakufa.
Ini ndaigona kutora zvimwe zvakafanana nezvematongerwo enyika achangopfuura, asi izvo zvinongofinha. Ngatitarisei pane iyo American Idol - uko vanhu vazhinji vanovhota kupfuura musarudzo dzemutungamiri wenyika, chero zvakadaro. Kutengesa kunofananidzwa sei nemavhoti paAmerican Idol?
7 mamirioni emakopi
Vamwe Mwoyo, Carrie Underwood (anokunda, mwaka 4)
6 mamirioni emakopi
Breakaway, Kelly Clarkson (anokunda, mwaka 1)
3 mamirioni emakopi
Daughtry, Chris Daughtry (nzvimbo yechina, mwaka wechishanu)
2 mamirioni emakopi
Ndatenda, Kelly Clarkson
Kuyera kweMurume, Clay Aiken (anomhanyisa-kumusoro, mwaka 2)
Mutambo weCarnival, Carrie Underwood
1 mamirioni emakopi
Aneshungu, Ruben Studdard (anokunda, mwaka 2)
Kisimusi yakanaka neRudo, Clay Aiken
Zvisunungure Iwe, Fantasia (anokunda, mwaka 3)
Zvangu Zvita, Kelly Clarkson
Taylor Hicks, Taylor Hicks (anokunda, mwaka 5)
Makopi mazana mana nemakumi mashanu
Ndinoda Ngirozi, Ruben Studdard
Josh Gracin, Josh Gracin (4th nzvimbo, mwaka 2)
Icho Chaicho Chinhu, Bo Bice (anomhanyisa-kumusoro, mwaka 4)
Zviuru Zviuru Nzira Dzakasiyana, Clay Aiken
Mudiki-Guta Musikana, Kellie Pickler (6 nzvimbo, mwaka 5)
Elliott Yamin, Elliott Yamin (nzvimbo yechitatu, mwaka wechishanu)
Mwaka nhanhatu nemamirioni makumi matatu + maalbham gare gare, zvinonakidza kutarisa kuti ndivanaani vamwe vevakakunda (uye vakarasika). Carrie Underwood naKelly Clarkson account ye pamusoro hafu yekutengesa kwese.
Izvo zvinobudirira here? Mumakore matanhatu 6 'zvigadzirwa' zvakagadzira hafu yekutengesa kwese. Uye imwe chete yeaya 'zvigadzirwa' yainyatso kubuda. (Kelley Clarkson sezvo aive wekutanga Idhori.) Ini handisi muverengi, asi dai ndaizoronga mavhoti, makore uye rekodhi kutengesa ... handina chokwadi chekuti izvi zvinosangana nechero pfungwa yeSix Sigma kubudirira.
American Idol chirongwa chiri nani pane terevhizheni pane kutsvagisa kwemumhanzi Iko kutengesa kwaunoona kuri chaizvo chete nekuda kwekuratidzwa kwekuratidzwa. Yakapihwa HERE show, ini handina chokwadi chekuti chero tarenda ingadai yakatengesa akawanda maalbum sezvavakaita.
Mangwanani ano ndaona kubvunzurudzwa kupi Carly Simon akanyaradza Brooke White pakuwana bhuti nezuro husiku. Carly akamuudza kuti arambe achiita zvaari kuita. Carly akatotaura kuti shanduro yaBrooke yekurova kwake ndiyo yakanakisa yaakange ambonzwa.
Zano raCarly raive iri (rakadudzirwa):
Iye anokunda weAmerican Idol haasiye akanyanya kunaka kana akasarudzika, ndiyo inonyanya kufarirwa.
Tarenda ravari kuburitsa kunze kwese kutaridzika uye vanoita zvakafanana (Daughtry haina kuenderana nemutemo zvachose!), Asi tarenda rakasarudzika ndipo pariri. Ndiwo maartist ayo anogara kwehupenyu hwese - vamwe vangangodzima kunze kwekutarisa (vamwe vatove!).
Bob Dylan angaita sei paAmerican Idol? David Bowie? Kubaya? Handina chokwadi chekuti chero mumwe wavo angadai akaita denderedzwa rekutanga. Ndihwo hunhu hwavo hwakavatyaira, kwete kugona kwavo kutaridzika zvakanaka pakamera uye nekurova yakakwira notepi kwemasekondi mashoma. Handisi kutora pfuti dzakachipa patarenda paIdhori - vanhu vane tarenda zvisingaite uye vanokodzera mukana wavo mukukudza. Ini handisi kugogodza tarenda. Ndiri kugogodza maitiro anofanirwa kunge ari kuburitsa maAmerican Idols gore rimwe nerimwe.
American Idol inobatsira seyese bhizinesi. Iyo terevhizheni show ndeimwe yeakanakisa kumhanya kweanoverengeka makore. Nezve izvo zvese zvekumhanyisa, tinya, saizi yevateereri, nezvimwe, Idhori rinofanira KUMIRA iyo Machati emabhiribhodi. Asi Idol rekodhi yekutengesa iri kuramba ichiderera. Sei? Nekuti gore rimwe nerimwe, ivo vari kushandisa kubvumirana kuti vawane anokunda.
Tags: peji rekutakura nguvapeji kurodha nguvasocial media chiitikokumhanya kwewebhu
May 1, 2008 pa 8: 52 PM
Chinyorwa chinonakidza. Ini ndinofunga kuti vanhu vazhinji varinani kutevedzera modhi yakabudirira, zvisinei, uye kuve neyakaenzana chiyero chekubudirira nayo. Kuti uwane mhando yekubudirira yaDylan unofanirwa kuve wakasarudzika, ane tarenda uye nerombo rakanaka. Hazvizombofa zvakaitika kune vanopfuura vashoma kwazvo.
Ehe haamboziva, pamwe ndini. 😉
May 2, 2008 pa 12: 23 PM
Ini ndinofunga vanhu 'vakachengeteka' kuteedzera yakabudirira modhi asi ini handina chokwadi chekuti ivo vari nani Paunenge uchinge uine modhi, iwe unofanirwa kuve nechikonzero chinogombedzera chekupa chechipiri kana chechitatu kana chechitanhatu. Hameno kana American Idol yaisazoita zvirinani nekuve neshanduro yenyika rimwe gore, dombo vhezheni imwe, hiphop imwe… handifunge kuti kupa muenzaniso mumwe chete gore rimwe nerimwe kuchasimudzira bhizinesi - hazvisi izvo zvinotsigira rekodhi kutengesa.
Kutenda nekupindura - hurukuro yakakodzera!
May 1, 2008 pa 11: 30 PM
Zvakanaka, kana yakasarudzika iri izvo zvinotora kuti ugare kwehupenyu hwese, saka tichave tichiona Taylor Hicks kutenderedza kwenguva refu, yakareba. Ndiani anoziva kana achizombove akakura kudaro, asi hes achange ari kunze uko. Uye vazhinji vedu chaizvo, tinomufarira. Akasiyana pane chero wandakaona. Ida izwi rake.
Brookes izwi nderimwe randinofarira zvakare.
May 2, 2008 pa 7: 47 AM
Zvinosekesa ini ndanga ndichingoti kumukadzi wangu nezuro husiku kuti American Idol haina kuburitsa hofori nyowani yemwaka yakati wandei izvozvi. Carrie Underwood ndiye wekupedzisira (uye Simon akaona kuti angave anonyanya kufarirwa Idhori). Ini ndinopokana nevanoona vazhinji veAmerican Idol kuti vatumidze (kuitira) vakundi veAmerican Idol kubva kumusoro kwemisoro yavo. Izvo zvese zvine mukurumbira… panguva iyoyo. Semuenzaniso, ndiani akakunda Super Bowl makore matatu apfuura? Wakareba zvakadii uchifunga nezvazvo?
Shameless plug yambiro: Chero bedzi tiri pamusoro wenyaya yeAmerican Idol, kana iwe uchida kuseka kwakanaka, tarisa ino saiti shamwari yangu uye ini tichangotanga vhiki rapfuura. Iyo pfupi blog pamusoro pemitemo * isu * tinofunga vese vanokwikwidza vanofanirwa kutevedzera: http://ouridolrules.wordpress.com.
May 2, 2008 pa 12: 30 PM
Mitemo Yedu Yezvidhori inosekesa. Rangu raizove, “Tora kuchera pana Simon. Vanhu vanozovhota kuti vangoona achigumbuka uye avete. ” Kuzviita mushure mekutanga kwako Simoni kunonoka.
Iwe uri kuenderera mberi nemamwe mazwi ako futi. Simon aive akarurama re: Carrie; zvisinei, ini ndinogona kuwedzera kuti kwakawanda kwekuzivikanwa kwake kunotungamirwa nerunako rwake runoshamisa, kwete chete tarenda rezwi. Handina chokwadi chekuti angadai ari Billboard 100 pasati pazera rino revhidhiyo.
May 2, 2008 pa 1: 39 PM
Pasina mubvunzo kuti kubudirira kwaDylan kwaisave nekuti aive / ari muimbi akakurisa. 🙂
Zvikamu BitWise Solutions, Inc.
May 3, 2008 pa 11: 03 AM
Mushure megore rekutanga, hapana chinhu chitsva nezveAmerican Idol. Sekufunga kwangu vanhu vavakasarudza kuve pachiratidziro vese vanokunda. Ivo vanoonekwa paTV uye vasaina ivo!